Flash Browser အားလုံးအတွက် Flash Blocking
အင်တာနက်သည် Flash မပါဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သည်
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 11, 2010 အင်္ဂါနေ့, မေလ 3, 2016 Douglas Karr
စတိဗ်ဂျော့ဘ်ဖြစ်ခဲ့သည် မှန်သော။ Flash blocker ရဖို့အကြံပေးတဲ့သူက Blake Matheny ပါ။ Blake ဟာငါနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ရတာအပျော်ဆုံးအင်ဂျင်နီယာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ သူနဲ့လည်းအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် အကျဉ်းချုပ် မှာ ChaCha။ ငါကအနည်းဆုံးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာကုမ္ပဏီနှစ်ခုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးကိုအသွင်ပြောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နားထောင်မယ်လို့ငါထင်တယ်
ငါသူ့ကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး Chrome နဲ့ Firefox ကိုအသုံးပြုပြီးစာမျက်နှာတွေကိုအေးခဲ၊ ပိတ်ဆို့မှု (သို့) ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်ကိုယာယီသော့ခတ်ထားတာတွေကိုပဲကြည့်နေတုန်းပဲ။ တစ်ခါတလေတော့ browser (ဘရောက်ဆာ) တွေကိုသတ်ပစ်ရတယ်။
ဒီနောက်ဆုံးအပတ်မှာမိုက်ကယ်ကလိုရန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ် ဆောက်လုပ်ရေးမြို့။ မိုက်ကယ်သည်သူ၏တီထွင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သူများကိုအကောင်းဆုံးစုဆောင်းခဲ့သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် flash blockers ကိုအသုံးပြုသည်။ သူကမကြာသေးခင်ကတစ်ခုသုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးသူကမြန်ဆန်တဲ့ဆိုဒ်တွေဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လုပ်တယ်၊ ပြသနာနည်းတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာငါစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ငါ Chrome အတွက် flash ကို blocker တက် loaded ။ အပတ်တိုင်းကောင်းကင်ဘုံမှာရှိခဲ့တယ်။ အရာရာတိုင်းဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကုန်သွားတယ်၊ ဘာမှလည်းမအေးတော့ဘူး။ ငါ Flash အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိဘူး။ အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ် Flash လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် blocker သည်ကျွန်ုပ်အား Flash component ပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ ဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ် (ဥပမာ Youtube) ကိုညာဖက် နှိပ်၍ Flash ကို site မှအမြဲတမ်းခွင့်ပြုရန်ရွေးနိုင်သည်။
Chrome ကို - Flashblock
Firefox ကို - လက်နှိပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ဖြည့်စွက်မှု။
Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း - ToFlash ကိုနှိပ်ပါ။.
တေးသံစုံကဇါတ် - လက်နှိပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။.
IE ကို7- ကြော်ငြာ blocker Flash ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိသည်။
IE ကို 8 - ဖွင့်ရန်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုရှိသည် per-site Flash ပိတ်ဆို့ခြင်း.
Flash ကိုမည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ဆိုက်ပိုင်ရှင်အချို့သည်၎င်းကိုပင်မသိကြဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်သည်ဤဘလော့ဂ်ကိုဖွင့ ်၍ Flash တွင်ကြော်ငြာ ၃ ခုပေါ်လာသည်ကိုမသိခဲ့ပါ ဘာမှမရှိဘူး ချစ်သူ သူတို့အကြောင်း ... ဒါပေမယ့်သူတို့အဲဒီမှာ!
ဒီနေရာမှာပိုပြီးသိသာထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Castor Alerding Flash နှင့်မပါဘဲနှင့် site ကို။ Flash ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ပေါ်လွင်ပြီး၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Flash module ကိုအသုံးပြုသည်။
HTML5သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ Adobe သည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် Flash ကိုအောက်ခြေမှပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော် Steve Jobs နဲ့သဘောတူတာကိုသဘောမတူပါဘူး။ Flash ကိုအနာဂတ်တွင်လောင်းကစားနေသောကုမ္ပဏီများအတွက်မူသင်အရန်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရယူလိုပေမည်။ အကယ်၍ သင် HTML5ကိုမတွေ့ပါက၊ ကြီးစွာသောသရုပ်ပြ…သူတို့ကသင်ကြည့်ရှုရန် Safari ကိုအသုံးပြုရန်သင့်ကိုတောင်းဆိုသော်လည်း။
Tags: ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းAdobe Flash ကိုCastor alerdingBlake mathenychachaကလစ်အကျဉ်းချုပ်flash ကိုFlashblockper-site ကို flash ပိတ်ဆို့ခြင်းSteve Jobs
Douglas Karr Friday, June 11, 2010 Tuesday, May 3, 2016
အသုံးဝင်မှုနှင့်အသုံးဝင်မှုအပေါ်ဒီဇိုင်းအပေါ်တစ် ဦး ကဗီဒီယို
WordPress 3.0 - ကျွန်ုပ်မစောင့်နိုင်ပါ။